Convert Zimbabwe dollar to yen
Zimbabwe dollar to yen convertion. Zimbabwe dollar price in Yen today on currency exchange market.
10 Zimbabwe dollar = 3.55 Yen
The change in the exchange rate of Zimbabwe dollar to yen occurs once a day. Information about the exchange of currency given from open sources. Banks are engaged in the transfer of Zimbabwe dollar into yen. 1 Zimbabwe dollar rose by 0 yen. Zimbabwe dollar rises relative to yen since yesterday. The Zimbabwe dollar rate increased against yen by 0 hundredths of a percentage point.
Exchange rate Zimbabwe dollar to Yen
A month ago, Zimbabwe dollar can be exchanged for 0.34 yen. Three years ago, Zimbabwe dollar could be sold for 0.35 yen. Five years ago, Zimbabwe dollar could be sold for 0.32 yen. 0.9% - change in the exchange rate of Zimbabwe dollar to yen per week. 3.71% per month - the change in the exchange rate of Zimbabwe dollar. The change of the exchange rate of Zimbabwe dollar to yen for a year is 8.94%.
Exchange rate Zimbabwe dollar (ZWL) to Yen (JPY) live on Forex exchange market
Currency converter Zimbabwe dollar Yen
Zimbabwe dollar (ZWL) to Yen (JPY)
10 Zimbabwe dollar 3.55 yen
50 Zimbabwe dollar 17.74 yen
100 Zimbabwe dollar 35.47 yen
250 Zimbabwe dollar 88.68 yen
500 Zimbabwe dollar 177.35 yen
1 000 Zimbabwe dollar 354.71 yen
2 500 Zimbabwe dollar 886.77 yen
5 000 Zimbabwe dollar 1 773.54 yen
Today, 3.55 yen can be bought for 10 Zimbabwe dollar. Converting 25 Zimbabwe dollar costs 8.87 yen. You can sell 17.74 yen for 50 Zimbabwe dollar. If you have 100 Zimbabwe dollar, then in Japan they can be exchanged for 35.47 yen. If you have 250 Zimbabwe dollar, then in Japan they can be exchanged for 88.68 yen. Today, you can convert 500 Zimbabwe dollar for 177.35 yen.
Zimbabwe dollar to Yen exchange rate
Zimbabwe dollar to Yen today at 22 October 2021
Today at 19 October 2021, 1 Zimbabwe dollar costs 0.354663 yen. 18 October 2021, 1 Zimbabwe dollar = 0.353569 yen. 17 October 2021, 1 Zimbabwe dollar costs 0.353205 yen. The maximum ZWL/JPY exchange rate in was on 19.10.2021. Zimbabwe dollar to yen on 15 October 2021 - 0.350231 yen.
Zimbabwe dollar to Yen exchange rate history
Zimbabwe dollar and Yen currency symbols and countries